ဘယ်သူ့ကားလဲ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » ဘယ်သူ့ကားလဲ?
Posted by မင္း ခန္႔ ေက်ာ္ on Aug 18, 2014 in Think Different | 21 comments
ဒါနဲ့ကိုသူရတင်တဲ့ပိုစ့်တပုဒ်ပေါ်လာတော့ ဝင်ဖတ်ကြည့်။ ဝင်ပြီးနဲနဲလျှာရှည်။
ကိုသူရပိုစ့်ထဲဝင်ရေးလို့မရလဲ ပိုစ့်အနေနဲ့တင်မယ်ဆိုပြီး ရှားရှားပါးပါး
ဟိုးးးးရှေးးးး ရှေးးးးး တုန်းကပေါ့ဗျာ။
မောင်ဘ နဲ့ မောင်လှ ဆိုသော သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ရှိလေသည်
ဘဝခရီးလမ်းကို မှန်မှန်လျောက်လှမ်းရင်း မိဘကဲ့သို့ပင်
ရေး ပါကောင်းမွန်သဖြင့် တကျောင်းလုံး
သည်မရောက် ဘဝတွင် ချစ်သူမိန်းက
လေးအား ခိုးယူမိသည်နှင့် နှစ်ဖက်မိဘ
ပညာမတက်၍ငွေကောင်းကောင်းရသည့် အလုပ်မျိုးမရနိုင်ချေ။ ပါးစပ်ပေါက်များကလည်း နှစ်နှစ်လျှင်တပေါက်နုံန်းဖြင့် မှန်မှန်တိုး
မောင်လှတယောက် ပညာကို အခြေအနေပေးလျက် ကောင်းကောင်း
မသင်ခဲ့ရခြင်းကို နောင်တရနေပြီလော ?
တိုင်းအဆင့် စီးပွားရေး ဆွေးနွေးပွဲတခု
များကို လွယ်လင့်တကူဖြစ်စေရန် သီးသန့်ပြင်ဆင်ပေးထားရာ
လည်း တစီးမှာ အဌားကား
တစီးမှာ ပရာဒို အဖြူရောင်တစီး ဖြစ်
တွင် သီးသန့်နေရာမှ အခြားကားများ
နှစ်စီးမှ ဒရိုင်ဘာနှစ်ဦးမှာ မိမိတို့ အရှင်
အရှင်နှစ်ပါး မိမိ ကားအသီးသီးသို့ ဝင်ကြ လေရာ
တဦးမှာ မောင်ဘ ဖြစ်လျက်
ကိုခန်​့က ​မောင်​လှကို ပရာဒို စီး​စေခြင်​တာလား။ သူကြီး​ကော်​မန်​့​တော့မဖတ်​ရ​သေးဘူး။အဲ​တော့သူဘာဆိုလိုချင်​တာလည်​းမခန်​့မှန်​းတတ်​​သေးဘူး။ ကျမ အယူအဆ ဆိုရင်​​တော့ ပညာတတ်​တာပိုကြိုက်​တယ်​။ ပညာနဲရှာတဲ့ဝင်​​ငွေကို ပိုတန်​ဖိုးထားတယ်​။ ပညာဆိုတာ​ကျောင်​းသင်​ခန်​းစာကိုချည်​းဆိုလိုတာမဟုတ်​ပါဘူး။ ဖြစ်​နိုင်​ရင်​ ကိုယ်​နှစ်​သက်​တာကို​လေ့လာ​စေချင်​တယ်​။ ပိုက်​ဆံရတဲ့အရာကို​လေ့လာတာထက်​ ကိုယ်​နှစ်​သက်​ရာကို လုပ်​တာပိုထူးချွန်​​စေတယ်​။ စိတ်​ဖိစီးမှုနည်​းပြီး တတ်​​မြောက်​မူမြန်​ဆန်​တယ်​။ အဲ့ဒီအရာ​တွေကိုယ်​့မှာပိုင်​ဆိုင်​ထားရင်​ပိုက်​ဆံက​နောက်​ကလိုက်​လာလိမ်​့မယ်​။။
အန်တီရဲ့ ချစ်ရတဲ့သူတွေထဲက ဘယ်သူကို
မဆို (အကို အမ အမျိုးသား အမျိုးသမီး သား သမီ)
ပရာဒိုပဲစီး​စေချင်​တာ​ပေါ့။ ဒါ​ပေမဲ့ ပညာတတ်​လည်​း သူများခိုင်​းတာလုပ်​ သူ​ဌေးမဖြစ်​ဘူးဆိုတဲ့မတ်​​စေ့ အများကို မ​ပေး​ချင်​ဘူး။ ပညာတတ်​ရင်​ပိုပြီးကြီးပွားမယ်​ အခွင်​့အ​ရေးပိုရလွယ်​တယ်​ဆိုတဲ့မတ်​​စေ့ပဲ​ပေးချင်​တာ။ မြန်​မာနိုင်​ငံပြင်​ပမှာ ပညာ​ရေးနဲ့လိုက်​ပြီးဘယ်​​လောက်​ ကွဲပြားသွားတယ်​ဆိုတာ ကိုယ်​တိုင်​​တွေ့​နေရလို့ပါ။ ဖတ်​လို့​ကောင်​းဖို့ပဲ​ရေးတာဟုတ်​ဘူး။ တကယ်​ကြိုးစား​စေချင်​တဲ့​စေတနာပါ။
ပညာရေးကို ပြင်မယ်ဆိုရင် ကျတော်က
ပညာ မှာက စီးပွားရှာတာလဲ ပညာ
လူပေါင်းသူပေါင်းဆန့်တာလဲ ပညာပဲ ဆိုတော့ကာ…….
ရောက်တဲ့နေရာမှာ ရေပေါ်ဆီဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတာပဲ။
ထောပတ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ယိုကျထားတဲ့ ဆီ ဖြစ်ဖြစ် ရေပေါ် ပေါ်တာပဲ ဟာ။။
နာမည်ကျန်မကျန် ကိုယ်မှ မသိတော့ပဲ။
အဲဒီတော့ အဆုံးစွန် ……
သူပုန် ဖြစ်လည်း သူပုန်ဗိုလ် လုပ်။
(မိန်းခေးဆိုရင် သူပုန် ဗိုလ် ကတော်ဖြစ်အောင်လုပ်)
ပညာတွေ ပြင်ညာတွေ ခွဲလို့ ရတဲ့ အစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့ ခေတ်ကြီးမှ မဟုတ်။
အတန်းပညာ တတ်လို့ ဘာမှလုပ်စားလို့ မရ လို့ တွေးရတဲ့ ခေတ်ရောက်နေပြီ။
“ပိုက်ဆံသည်သာအရာရာ” ခေတ်ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်
ထို့ကြောင့် စာများများသင် ကျောင်းများတွင် နှစ်ရှည်လများ
တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် အဖိုးတန် ကျွန်များကို
၁ဝ တန်းတုန်းက ဆရာ တစ်ယောက်ပြောဘူးတယ်။
လူတစ်ယောက်က ပညာ/ဥစ္စာ/အာဏာ အနည်းဆုံး တစ်ခု ရှိမှ အရာရောက်သတဲ့။
(ဝယ်လို့ရတဲ့ ပညာတွေကို ပြောတာတော့ ဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ)
ခုခေတ်က တဲ့ ….
အာဏာနောက်က ဥစ္စာလိုက်နိုင်တဲ့ ခေတ်တဲ့။
ပညာရှင်တွေ တိုးလို့ မရတဲ့အချိန်ကို ရောက်ဦးမှာတဲ့။
နောက် ၁၄ နှစ် အတွင်း ကျနော်တော့ အခြေအနေတွေကို မြင်တိုင်း အဲ့ ဆရာကြီးစကားပဲ သွားသွား သတိရတယ်။
အဲတော့ လူတွေက လုပ်ပိုင်ခွင့်တို့၊ အာဏာတို့၊ ဘက်ဂရောင်းကောင်းကောင်း ဆိုတာတွေနောက်လိုက်ရင်းနဲ့ ကျန်တာတွေ က အရေးမပါဘူးဖြစ်ကုန်တာ။
အဆီကို စား အသားကို မြိုနေတဲ့ သူတွေက အသံထွက်စရာမလိုဘူးလေ။
ငတ်တဲ့ သူတွေက အသံထွက်တော့ ..
ကျွန်တော် နည်းနည်း ဆွေးနွေးကြည့်မယ်နော်… ပညာ.. အခု ဘွဲ့ရတဲ့အထိ တက်ခဲ့တဲ့.. ပညာ… တကယ်တော့ သညာပါ.. Concept ပါ… အခုခေတ်ပညာရေး မကောင်းဘူး ဘယ်လောက် ပြောပြော.. ကုမ္ပဏီတွေက ဆယ်တန်းအောင် ဘွဲ့ရလို့ ဘာလို့ ခေါ်ကြတာလဲ… အဓိကက စဉ်းစားတွေးခေါ် ဆက်စပ်တွေးခေါ်မှုက အနည်းနဲ့ အများ ကွာတယ်ဗျ… အဲဒီမှာပဲ ပညာတတ်အတူတူ… တချို့က ဝန်ထမ်း… တချို့က ကိုယ်ပိုင်လုပ်…ဝန်ထမ်းနဲ့ မကြီးပွားဘူး မပြောနိုင်ဘူး… ဒါတွေက အတန်းပညာကဟာတွေ နဲ့ မဆိုင်ဘူး… ပြင်ပ ပညာ… ကျွန်တော် ပြောပြောနေတဲ့ General Knowledge (ဂျန်နဝါရီနောလစ်) နဲ့ ဆိုင်တယ်ဗျ… အဲတော့ Summary က လူ(ကိုယ်ကိုယ်တိုင်)ရယ်၊ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရယ်၊ ထိုက်သင့်သော အတန်းပညာရယ် ပေါင်းရင် ပရာဒိုစီးတဲ့သူ ဖြစ်မှာပဲ… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့ Point Of View ပါ…
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျတော်ပြောချင်တာက ပညာကောင်းကောင်း အတန်းမြင့်မြင့်
ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးဘွဲ့ နဲ့ဝန်ထမ်း စပ်ဆက်ပုံ ကျတော့်အမြင်လေးတော့ပြောပါရစေ။
သင်တဲ့အတိုင်း မှတ်ရ ကျက်ရပါတယ်။ဒါရေးဆိုရေးရပါတယ်။ ဖြေဆိုရင်
ဖြေရပါတယ်။ ဒီလို ပုံစံခွက်ထဲကို တနှစ်ပြီးတနှစ်သွားရပါတယ်။နှစ်ပေါင်း
ဒီတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်နဲ့သွား အချိန်နဲ့စား ပြောတာနားထောင်
အချိန်တန်ရင်စား ခိုင်းတာလုပ် ပြောတာနားထောင် ပေးသလောက်နဲ့မာန်တက်။
ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ပညာရေး ဘောင်ထဲကအလုပ်ခွင် အများစု 99%အတွက်မလွယ်။
ဒီတော့ ပညာကိုလိုသလောက်ပဲအချိန်ပေးသင် ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ အတွေ့အကြုံ
ရယ်လက်တွေ့ရယ် ဗဟုတွေရယ် ရသလောက်ရှာ ဒီလောက်ဆိုရင်
ကျတော်ပြောနေတာက ငွေရှာရင်း အဓမ္မနည်းလမ်းတခုမှမပါဘူးနော်။
“လူ(ကိုယ်ကိုယ်တိုင်)ရယ်၊ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရယ်၊ ထိုက်သင့်သော အတန်းပညာရယ် ပေါင်းရင် ပရာဒိုစီးတဲ့သူ ဖြစ်မှာပဲ… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့ Point Of View ပါ”
အမြင်ချင်းတူတာ ဝမ်းသာမိပါတယ်… ကိုမင်းခန့်… နောက်တခုဖြည့်စွက်ချင်တာ ရှိတယ်ဗျ… အတန်းပညာလဲ တက်ပေါ့.. တက်ရင်း Dual ပြေးတယ်ဆိုတာ ရှိသေးတယ်… ကျွန်တော် ၁ဝ တန်း ပြီးပြီးချင်း ဘယ်ရောက်လဲ သိလား… ကွန်ပျူတာဆိုင်မှာ ထမင်းစားကျွန်ခံ ပညာသင်ရတယ်… ဒါနဲ့ပဲ လုပ်လာရင်း နောက်ထပ်တလိုင်းပေါ့ ကြုံရာလုပ်မယ်ဆိုပြီး မားကက်တင်းဘက်ထပ်လိုက်တယ်… ဒါပေမဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ မားကက်တင်းပေါ့… နောက်တော့ အိုင်တီအလုပ်က ပြန်ပေါ်လာတယ်.. ကွင်းစ မပြတ်တော့ ပြန်ဝင်တယ်… အခု မြေဘက်ရောက်တယ်… မားကက်တင်းနဲ့ နှီးနွယ်တော့ အမြင် ရတယ်.. ရောင်းတာ ဝယ်တာ လာဘ်မြင်တယ်… ဆိုလိုတာက ထမင်းစားလက်မှတ်… ဘွဲ့က သုံးစားမရတာ သိတယ်… ကြိုပြီး ထမင်းစားလက်မှတ်ကို လုပ်ထားရတာ… အမှန် ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပြီးတယ်… ဂိုက်မလုပ်ချင်လို့… အင်္ဂလိပ်စာ ဖတ်ရတဲ့ အဲဒါသိရင် ပိုအားသာတဲ့ အိုင်တီအလုပ်ရွေးခဲ့တယ်… မားကက်တင်းမှာလဲ အခင်းအကျင်းတွေက အင်္ဂလိပ်လို ရေးတော့ ပိုတတ်တယ်ပေါ့… ကိုယ်ရည်သွေးခြင်းမဟုတ်ပါ…
၁ လူငယ်တိုင်း ဘွဲ့ရဖြစ်စေချင်ပါတယ်… ဆက်စပ်တွေးခေါ်မှု အတန်အသင့်ရဖို့…
၂ ၁ဝ တန်းပြီးတာ တလုံးဝင်ဝင် ၂ လုံးဝင်ဝင် ICE (Internet, Computer & English) သင်တန်းတက်ပါ… ပညာဒါနတွေ ပေါပါတယ်…
၃ ဒါကိုမှ စားဝတ်နေရေးအတွက် သိပ်လုံးပန်းရရင် ပိုက်ဆံနောက် မလိုက်ပါနဲ့… ပညာရရင် လစာနည်းပါစေ လုပ်ပါ… ဒါက ပြင်ပ ပညာတွေပါ…
၄ ဒါတွေ ဆက်စပ်မိတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာ တခုကို… လူ(ကိုယ်ကိုယ်တိုင်)၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ခုနက လုပ်ခဲ့တက်ခဲ့တဲ့ ပညာရယ် ပေါင်းရင် ပရာဒိုစီးရမှာ မလွဲပါဘူး…
တခုပါပဲ အချိန် ကြာတယ် မြန်တယ်ပဲ ကွာမှာပါ… လက်ရှိကျွန်တော်လဲ အဲလို ကြိုးစားနေတာပါ…
အောင်မြင်ခဲ့ရင် ဒီဖော်မြူလာလေးကို လူငယ်တွေ Motivation အတွက် အသုံးချမှာပါ… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ဒီပို့စ်တင်ပြီး ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်ရလို့ ကိုမင်းခန့်ကို ကျေးဇူးပါ… အမှားအယွင်းရှိလဲ ခွင့်လွှတ်ပါ… ဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့ Point Of View ပါ…
.အခုပြောထားတဲ့ ဥပမာ ၂ ခုကိုတော့ တိုက်ရိုက် မပြောလိုတော့ပါဘူး..။
.ဒီဥပမာတွေရဲ့ အလွတ်ကိုပဲ ဖြည့် ဆွေးနွေးချင်တယ်။
.စာကြိုးစားပြီး ပညာတော် အရာရှိကြီးသာဖြစ်ရင် ၊ သူကလဲ ရိုးသားရင် မကြီးပွားနိုင်ပါ
.အခု ဝန်ထမ်းလစာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်သလဲမသိပေမယ့်
.တစ်လ ဆယ့်ငါးသိန်းလစာရရင် တစ်လသုံးတာနဲ့ ကုန်မှာပါ
.နေဖို့အိမ် အလကားရရင်တောင် စုမိဖို့ မလွယ်ပါ။
.ဆရာဝန် အင်ဂျင်နီယာ ပိသုကာ လိုမျိုး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာနဲ့ဆိုရင်တော့ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ နှစ်အကြာကြီးနေရင် အသင့်အတင့် ကြီးပွားနိုင်ပါတယ်။
.ကျောင်းစာမတော်လို့ အပြင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ရင်လဲ
.မူလအရင်းအနှီး သို့မဟုတ် မိဘအရှိန်အဝါ သို့မဟုတ် မိဘရဲ့အောင်မြင်သောလက်ငုတ်လက်ရင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုခုမရှိပဲနဲ့
.ရိုးသား၊ မလိမ်ညာ၊ သူတပါးအခွင့်အရေးမကျူးကျော်၊ လူ့ကျင့်ဝတ်လိုက်နာပြီး ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ရင် ကြီးပွားဖို့ မလွယ်ရေးချ မလွယ်ပါ..။
.အခု လက်ရှိမှာ အချိန်တိုအတွင်း ကြီးပွားချမ်းသာလာသူတွေကို ကြည့်ရင်
၁။ ရာထူး နေရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ကို အသုံးချပြီး မတရားသောနည်းနဲ့ငွေရှာသူများ
၂။ ရာထူး နေရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူများကို အသုံးချပြီး မတရားသောနည်းနဲ့ငွေရှာသူများ
၃။ မိဘ ဆွေမျိုး တို့ရဲ့ အရှိန်အဝါကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ငွေရှာသူများ
၄။ မူးယစ်ဆေးဝါး လောင်းကစား ပြည့်တန်ဆာ စတဲ့ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းလုပ်သူများ
၅။ လိမ်ညာ ကောက်ကျစ် ယုတ်မာ လူ့ကျင့်ဝတ်ကင်းမဲ့စွာ ငွေရှာသူများ
.ဒီပိုစ့်ထဲက ပရာဒိုကား ကတော့ ကျုပ်ကားမဟုတ်တာသေချာကြောင်း….
.ဒီလောက် ကားတွေ ချေးပေါသေးပေါဖြစ်နေတာတောင် အဲ့ကားမျိုးမစီးနိုင်သေးပါကြောင်း…
ကို ညီမျှခြင်းချရရင် ယေဘုယအားဖြင့်အတူတူ။
အရာထမ်းက မိုးမခေါင်တာလောက်ပဲ မျော်ကိုးခွင့်အမြင့်ဆုံးရှိချိန်မှာ
ပါရာဒိုကားပေါ်သို့ တက်သွားသူသည် မနောဖြူလေးပင် ဖြစ်ပေတော့သည်….
လူနာမည်နဲ့ ကားအရောင်နဲ့က ဝမ်းဆက်
ကျန်တာတော့ နောက်မှ ပြောတော့မယ်
လောလောဆယ်ပြောချင်တာလေးကတော့. . .
ကျောင်းခန်းထဲက စီစဉ်ပြီးသား မေးခွန်းတွေ အဖြေတွေကို အလွတ်ကျက်ပြီး အမှတ်ပေးတဲ့ ပညာရေးထက်
ဘောင်ထဲက မဟုတ်သော ပညာရေးကိုသာ
လွတ်လပ်သော ပညာရေးကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ် ရယူနိုင်မယ့်အခွင့်အရေး
ဒေါ်ဖွားမေ နဲ့ ကိုသူရ ကျေးဇူးမကင်းတဲ့ပိုစ်ပါ
အရင်ပြင်စေချင်တာက အစိုးရတဖွဲ့လုံးရဲ့စနစ် အသုံးချ တဲ့ပေါလစီ။
ပညာရေးမိုးပျံအောင်ကောင်နေပါစေ တခြားနိုင်ငံကို ထွက်ထွက်သွားကြရင်ဖြင့်
( ပညာရေးမိုးပျံအောင်ကောင်းနေပါစေ တခြားနိုင်ငံကို ထွက်ထွက်သွားကြရင်ဖြင့်